Airbnb.org - Malunga
Umsebenzi wethu kukuvula amathuba okwabelana ngendawo, izinto zoncedo, nenkxaso ngamaxesha anzima.
Ngaphezulu kweminyaka eyi-8, uAirbnb uncede abantu ngexesha likaxakeka ngephulo Lamakhaya Oncedo. UAirbnb.org linyathelo elilandelayo. Singumbutho ongenzi nzuzo oyi-501(c)(3) ibe sinento yethu esizimisele ukuyenza nebhodi yabalawuli yethu.
Indlela esiqale ngayo.
Eli cebo lize nombuki zindwendwe
Isixeko saseNew York saye safikelwa yiNkanyamba uSandy, enye yezona nkanyamba zakha zambi embalini. UShell, umbuki zindwendwe ka-Airbnb waseBrooklyn, waqhakamshelana noAirbnb ecela ukuvula ikhaya lakhe, elivulela abantu ekwakufuneka befudukile. Iqela lakwa-Airbnb lasebenza iiyure ezininzi lisenzela ukuba le ndawo ifumaneke ngokukhawuleza kubantu ababefuduka ibe kungekudala, baba ngaphezu kwe-1 000 ababuki zindwendwe abavulela amakhaya abo badinga uncedo.
Indlela echaphazele ngayo Inkanyamba uSandy: Ukuvula amakhaya ngexesha likaxakeka
UAirbnb wenza ukuba ababuki zindwendwe abangakumbi bakwazi ukunceda
UAirbnb usungulaIlungiselelo lokunceda xa kwehle intlekele elenza ababuki zindwendwe emhlabeni wonke bakwazi ukuvulela abantu amakhaya abo simahla ngexesha leentlekele.
Aprili – Meyi
Ababuki zindwendwe kwihlabathi lonke bamkela abasebenzi abancedayo
U-Airbnb wenza isebenze elungiselela inyikima yaseNepal yaye ababuki zindwendwe bamkela iqela lokuqala labasebenzi abancedayo, kuquka namavolontiya avela ku-All Hands and Hearts.
Meyi – Septemba
UAirbnb usebenza nemibutho engenzi nzuzo ukuze aqonde indlela anokunceda ngayo
Ubambiswano lwenziwa neFederal Emergency Management Agency (FEMA) ukuze luncede ekuhambiseni izinto zokunceda ukulungela imo yongxamiseko kubabuki zindwendwe neendwendwe. EGrisi nakwiiBalkans, uAirbnb uqalisa ukusebenza noMercy Corps kunye neKomiti Yokuhlangula Yomhlaba Wonke ukuze abonelele ngezindlu kubasebenzi bohlangulo abatshotsha phambili kwingxaki yeembacu zaseSyria.
UAirbnb ukwaqalise ukubonelela ngezibonelelo zezindlu kwimibutho eyi-15 nangaphezulu edinga izindlu ukuze ihlalise abathengi bayo okanye abaqeshwa bayo kuquka neService Year Alliance, iMake-a-Wish neSummer Search.
Intsapho yababuki zindwendwe isabela kudubulo olwenzeke kwiklabhu yasebusuku iPulse
Emva kokucelwa ngurhulumente wasekuhlaleni, uAirbnb, u-Uber, noJetBlue baye badibana ukuze babonelele ngeendawo zokuhlala, amatikiti okukhwela ipleyini nezithuthi zokuthutha iintsapho ezifike ngepleyini zize emingcwabeni okanye zizo kutyelela abantu bazo esibhedlele. Esi ibe sisihlandlo sokuqala intsapho ebuka iindwendwe ifaka isandla ekubukeni iindwendwe ezichatshazelwe kukudutyulwa kwabantu abaninzi.
I-White House ihlaba iKhwelo Kwiinkampani Zabucala Ukuba Zisabele Kwingxaki Yeembacu Esemhlabeni Wonke. U-Airbnb uyaphendula. Umseki we-Airbnb, uJoe Gebbia wayengomnye wabaphathi abayi-20 ababemenywe nguMongameli uObama ukuba bazibophelele kwingxaki yeembacu.
UAirbnb usebenzisana noMake-a-Wish kuba efuna ukunika intsapho enye ngosuku indlu ngo-2017.
UAirbnb uzibophelela kwi-International Rescue Committee
Ukuze ancede xa kukhutshwa umthetho ngumongameli waseMerika wokuba kuyekwe ukwamkelwa naziphi na iimbacu nowokuba okwexeshana mabangangeni abantu abasuka kumazwe ayi-7 anamaSilamsi amaninzi, uAirbnb uzibophelela ekunikezeleni ngeendawo zokuhlala kwabo bachaphazelwe ngulo mqathango. Ukuze ancede, uAirbnb uthembisa nangokunikela nge$4 miliyoni kwiminyaka eyi-4 kwi-International Rescue Committee ukuze ancede ngeendawo zokuhlala ezidingwa ngabantu abaye banyanzeleke bafuduke.
USusan noMousa eDenver
UAirbnb uvula Amakhaya Oncedo ngokusemthethweni
Ngosuku Lwehlabathi Leembacu, uAirbnb wazisa ukuba uza kuphinda-phinda kwiinzame zakhe zokunikezela ngeendawo ngamaKhaya Oncedo. Le nkqubo iye yanceda intsapho yababuki zindwendwe ukuba ivule amakhaya ayo simahla kubantu abachaphazelwe zintlekele okanye ababaleke umlo.
Agasti – Septemba
Ukuza kuthi ga ngoku le ntsapho inceda abantu abangaphezulu kwe-20 000
Intsapho Yamakhaya Oncedo ijongana neentlekele eziyi-4 ngexesha elinye. Inkanyamba uHarvey yaba lelona xesha intsapho yababuki zindwendwe abasebenza kakhulu ngalo. Kwinyanga nje enye, ababuki zindwendwe banceda abantu abangaphezulu kwe-2 000 abaye bafuduka kumaphondo ayi-3. Ngexesha elinye, ababuki zindwendwe bavula amakhaya abo bamkela abo bachaphazelwe Yinkanyamba uIrma, Inkanyamba uMaria nenyikima yomhlaba yaseMexico City.
UAirbnb wazisa ngephulo leendawo zokuhlala abeze ngenxa yokugula
KwiNgqungquthela yoMhlaza kaBiden, uAirbnb wazisa ngephulo leendawo ekuhlala kuzo abeze ngenxa yokugula besebenzisana neHospitality Homes, iFisher House neMake-A-Wish. Ngeli phulo, intsapho Yamakhaya Oncedo iza kunikezela ngeendawo zokuhlala kwabo bahamba imigama emide ukuze bafumane unyango.
Uhambo lweemayile eziyi-800 ukuze kufumaneke unyango
Ababuki zindwendwe bayonceda kwimililo yamahlathi emibini eyahlukeneyo eCalifornia
Emva kweMililo yaseCamp naseWoosley eCalifornia, ababuki zindwendwe abangaphezu kwe-2 500 bavula amakhaya abo ibe abantu abangaphezu kwe-2 300 bafumana iindawo zokuhlala.
UAirbnb wenze indlela yokuba ababuki zindwendwe banikele ukuze baxhase Amakhaya Oncedo
Ababuki zindwendwe bebefuna iindlela ezingakumbi zokuba yinxalenye Yamakhaya Oncedo. Ukuze ancede, uAirbnb wazisa iindawo zokunikela ezivumela ababuki zindwendwe ukuba banikele ngenxalenye yengeniso yabo Kumakhaya Oncedo eenkampani esisebenzisana nazo ukuze kubekho imali yeendawo zokuhlala yabo bazidingayo.
Ababuki zindwendwe banikezela ngeendawo zokuhlala kubantu abangaphezu kwe-1 000 baseNew South Wales naseVictoria abachaphazelwe kukutsha kwamahlathi aseOstreliya. Eli lelona phulo likhulu lokusetyenziswa Kwamakhaya Oncedo emhlabeni wonke ukuza kuthi ga ngoku.
Intsapho yababuki zindwendwe ijongana nobhubhane weCOVID-19
UAirbnb wazisa ngendlela entsha ababuki zindwendwe abanokunikela ngayo ngeendawo zokuhlala kubasebenzi bezempilo nabo basabele kuqala abatshotsha phambili ekulweni lo bhubhane.
UAirbnb ulandisile ijelo lakhe lokunikela ukuze nabani na akwazi ukunikela kwimibutho engenzi ngeniso enceda abasebenzi abatshotsha phambili bafumane iindawo zokuhlala.
UAirbnb wazisa ngoAirbnb.org
UAirbnb umisela uAirbnb.org, ibe ubhiyozela wonke umsebenzi omkhulu owenziwa ngababuki zindwendwe neenkampani asebenzisana nazo ngamaKhaya Oncedo. Njengombutho ongenzi ngeniso ozimeleyo, uAirbnb.org uza kujongana nokunceda abantu bamkelane emakhayeni baze bancedane ngamaxesha obunzima.
Dibana nebhodi yethu.
‘UAirbnb uye wabonisa ukuba namandla okudibanisa abantu nokwamkela abantu ongabaziyo. UAirbnb.org uzimisele ukusebenzisa loo mandla ukuze atshintshe ubomi babantu nomhlaba wethu. Kulilungelo elikhulu ukuba yinxalenye yoku.’
‘Ndikhuthazwa yinto eyaqala ngomyalezo osuka kumbuki zindwendwe omnye, yaza yaba liphulo labantu abayi-100 000 abavula amakhaya abo kwiingingqi zabo. Kweli xesha lobunzima, lo msebenzi ubaluleke kakhulu kunangaphambili.’
‘Indawo yokuhlala yenye yezinto ezisisiseko ezifunekayo ebantwini ibe ngenkqubo yalo, iqela lakwa-Airbnb.org linikezela ngeendawo ngeli xesha zifuneka kakhulu.’
‘Ukunikezela ngeendawo zokuhlala xa abantu besengxakini yenye yeendlela zokubonisa ubuntu nokuvelana nabanye. Kuyandonwabisa kakhulu ukuba yinxalenye yeenzame zokwenza umahluko omkhulu nokutshintsha ubomi babantu.’
‘Kuye kwandivuyisa ukujoyina iBhodi ka-Airbnb.org ngenxa yomahluko omkhulu endikholelwa ukuba siza kuwenza ngokunikezela ngeendawo zokuhlala nezinto zokunceda abo badingayo.’
Indlela esisebenza ngayo.
Ukusebenzisana nemibutho engenzi nzuzo
UAirbnb.org unika izibonelelo imibutho engenzi nzuzo edibanisa abantu neendawo zokuhlala ithutyana, enika abantu izinto eziluncedo nenkxaso ekhethekileyo ngamaxesha obunzima. Sikwabonelela nangezindlu ezisimahla nezinezaphulelo ezinikezelwa ngababuki zindwendwe baka-Airbnb.
Ukutyala imali kwi-equity
Sikholelwa ekusebenziseni amandla ethu nezixhobo zethu ukuze sifake isandla ekwenzeni ihlabathi elinobulungisa ngakumbi. UAirbnb.org utyala izimali kwimibutho enamacebo neenkqubo ezihambiselana nokuzibophelela kwethu ekuhambiseleni phambili ubulungisa eluntwini.
Ukuqonda ifuthe lethu
Sifuna ukulandelela ifuthe lenkqubo yethu lenkxaso-mali neyeendawo zokuhlala ukuze ziphucule indlela iindwendwe zethu eziziva ngayo, sinciphise umthwalo wezimali, size someleze iintsapho kwaye senze iindwendwe zethu zizive zisekhaya.
Okwangoku, uAirbnb.org akazamkeli izicelo zenkxaso-mali. Ngo-2021, siza kuthumela inkcazelo malunga nomjikelo wesibonelelo ozayo ngokuthe ngqo kwimibutho engenzi nzuzo efanelekayo.
Indlela esisebenza ngayo noAirbnb, Inc.
UAirbnb.org ngumbutho ozimeleyo noxhaswa ngeemali ngabantu ibe ungumbutho ongenzi nzuzo oyi-501 (c) (3). UAirbnb.org usebenzisa itekhnoloji ka-Airbnb, Inc., iinkonzo kunye nezinye izinto ngaphandle kokubhatala ukuze afeze izinto ezifuna ukufezwa nguAirbnb.org. zokupha. UAirbnb.org yinkampani eyahlukileyo nezimeleyo kuAirbnb, Inc. UAirbnb, Inc. akambizi imali uAirbnb.org yokubhatalela ukusebenzisa kwakhe iwebhusayithi yakhe.
Inkqubo Yamakhaya Oncedo yenziwe nguAirbnb, ibe yesekwa phezu kwesisa sababuki zindwendwe baka-Airbnb, njengendlela yokunceda abantu abasweleyo bafumane iindawo zokuhlala zethutyana. Inkqubo Yamakhaya Oncedo ngoku itshintshelwa kuAirbnb.org, ibe uAirbnb.org uza kwakhela phezu koko sele kuphunyezwe yile nkqubo, ngokuhambelana nenjongo kunye nezinto ezifuna ukuphunyezwa nguAirbnb.org.
Imimiselo Yenkonzo Yokunikela Ngemali